Yaa xaq u leh go'aaminta halka uu ka dhacayo shirka 15-ka Febraayo? - Caasimada Online
Home Warar Yaa xaq u leh go’aaminta halka uu ka dhacayo shirka 15-ka Febraayo?
Muqdisho (Caasimada Online) – Shir uu ku baaqay madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay 15-ka Febraayo isugu yimaadaan isaga iyo madaxda dowlad goboleedyada, ayaa wajahaya caqabad xitaa kahor inta aanu billaabmin.
“Shirka 15-ka Febraayo lagu dhawaaqay waxey soo celineysaa rajada shacabka. Meesha lagu qabanayo iyo ka qaybgalayaasha waa arimo farsamo [oo] laga heshiin karo. Waxaa muhiim ah in Soomaalidu shirto, kuna heshiiyaan qaab iyo waqti doorasho. Haddii kale, waa loo meerinayaa,” ayuu yiri Dr Baadiyow.
Mudada xilheynta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo afar sano ahayd ayaa ku ekeyd 8-dii bishan February. Mucaaradku waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aqoonsaneyn. Dowladdu se waxay sheegtay in madaxweynuhu xilka heyn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub. Ma jiro waqti la ogyahay oo ay doorashadu dhici doonto.
Wasiirka warfaafinta Dubbe oo xalay la hadlay BBC-da waxuu mar kale ku celiyey in shirka uu iclaamiyey maadxweyne Farmaajo uu ka dhacayo Garowe, balse shirkii Golaha Wasiirada Puntland ee maanta ayuu maamulku mar kale ku go’aamiyey in shirkaas lagu qaabto magaalada Muqdisho.